एमालेले चितवनमा विजयको खाता खाेल्याे ! प्यानलै विजयी – Taja Khawar
एमालेले चितवनमा विजयको खाता खाेल्याे ! प्यानलै विजयी
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ ०१, २०७९ समय: ८:३४:५२
चितवन । चितवनमा एमालेले विजयको खाता खोलेको छ । कालिका नगरपालिका-११ र राप्ती नगरपालिका-६ मा एमालेको प्यानलै विजयी भएको हो ।
कालिका-११ को अध्यक्षका उम्मेदवार कृष्णबहादुर प्रजाले ५१३ मत ल्याएर विजयी भएका हुन् ।
विजयी हुने महिला सदस्य सीता माया चेपाङले ५०९, खुल्ला सदस्य मिलन चेपाङले ५१७ र लोकबहादुर प्रजाले ४९७ मत ल्याएका छन् । यस अगाडि नै दलित महिला सदस्य भने निर्विरोध निर्वाचित भइसकेकी छन ।
चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) को मेयरकी उम्मेदवार रेणु दाहालले आग्रता कायमै राखेकी छन्। उनी गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेकी हुन्।
भरतपुर-१ को २ हजार ५८१ गणना गर्दा दाहालले ९८० मत प्राप्त गरेकी छन्। यस्तै‚ नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार विजय सुवेदीले ८७१ मत प्राप्त गरेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवार जगन्नाथ पाैडेल ३२६ मत प्राप्त गरेका छन्।
उपमेयरमा गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार चित्रसेन अधिकारी १०५९ र एमालेकी हिमला गुरुङले ७२८ प्राप्त गरेका छन्।
उता, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृह नगर दमक नगरपालिकाको नगर प्रमुखमा एमालेकी गीता अधिकारीले १७३२ मत प्राप्त गरेकी छन् । पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार राप्रपाका उम्मेदवार राम थापाले १६४८ मत ल्याएका छन् ।
उपमेयरमा काँग्रेसकी रेगिना भट्टराईले १६४० र एमालेका अम्बिका खनालले १५०९ मत प्राप्त गरेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको गृहनगर दमकमा राप्रपा, काँग्रेस र जसपाले गठबन्धन गरेका छन् ।
लमजुङको मस्र्याङदी–१ मा एमालेको प्यानलै विजयी
Last Updated on: May 15th, 2022 at 8:34 am